DAAWO:Kacdoonkii maanta ka dhacay Laas-caanood Iyo Dhaawacyada | Afrikada
DAAWO:Kacdoonkii maanta ka dhacay Laas-caanood Iyo Dhaawacyada
Afrikada, Laas-Caanood: Abbaarihii 9:30 Am ayaa faraha la iskula tegay bartamaha suuqa magaalada Laascaanood halkaasi waxaa ka dhacay dhaawac soo gaaray 2 qof oo dumar ah waxaana iska horimaadkani uu dhacay kadib markii ciidamada maamulka Somaliland rasaas ooda kaga qaadeen suuqa weyn ee magaalada Laascaanood.
Rabshadaha ayaa bilowday kadib markii ay is af dhaafeen askar Somaliland ah iyo wiil dhalinyaro ah oo watey baabuur nooca raaxada ah.
“Laba baabuur ayaa suuqa soo istaagey waxay adeeg u raadinayeen ciidamada Somaliland kadib wiil baabuur wata ayaa soo ag istaagey naga dhaqaaq ayay dhaheen wiilkii wuu diidey kadibna inay gacan saaraan bay damceen shacabkii suuqa ku ganacsanayey ayaa shiid iyo gacan qaad ku bilaabay, kadib rasaas ayay fureen laba dumar ah ayay ku dhacday”, ayuu yiri goob-jooge magaciisa diidey inaan xusno.
Labadan hablood ayaa magacyadoodu kala yihiin: Sacdiya Xirsi Cabdilaahi iyo Shugri Cabdilaahi Ducaale waxaana hadda lagu dabiibayaa Cusbitaalka Manhal.
Shacabka ayaa markii danbe qaarkood lasoo baxeen qoryo kuwaasi oo rasaas ridey iyaguna taasi oo sababtay in ciidamadii Somaliland yaacan iyagoo ka cararay hal qori oo nooca AK47 ah iyo agab kale oo ay k amid yihiin kabo kuwa askarta ah oo qaar kamid ah askartu haleeli waayeen in ay qaataan.
READ MORE: DAAWO:Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Caalamka iyo Soomaaliya 25/08/2018
HALKAN KA DAAWO VIDEO:
Dhinaca kale, Waxaa jira iyana kacdoon xoogan oo dhinaca shacabka kuwaa oo markii danbe isu bedelay in laamiyada la gubo.